I-Level Up SA- Funa ibhonasi engu-100% kuze kufike ku-ZAR 1000
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-level up casino
Isibuyekezo se-Level Up Casino
Isofthiwe:NetEnt, Betsoft, Pragmatic Play, Play n GO, Evolution Gaming
Ibhonasi Lokukwamukela:100% Webhonasi Ize Ifike R10,000/5 BTC
200 Ama-Free Spins
I-Level Up Casino yasungulwa ngo-2020 futhi inikeza ikhathalogi ekhangayo yemidlalo enikezwe abanye babadali bemidlalo abafunwa kakhulu. Lokhu kufaka phakathi i-NetEnt, i-BetSoft, i-Pragmatic Play, i-Play ‘N Go, i-Evolution, ne-Wazdan, njll. Le midlalo ihlanganisa yonke imikhakha yezigaba zamakhasino ezinjenge-slots, imidlalo yetafula, i-video poker, futhi inesigaba sekhasino bukhoma. I-Level Up Casino nayo inokukhetha okukhulu kwama-jackpots aqhubekayo.
Iwebhusayithi ye-Level Up Casino ayiphezulu ekwakhiweni kodwa iyasebenziseka kalula. Izingxenye ezibalulekile ziyabonakala phezulu kakhulu, ngenkathi abadlali bengathola imininingwane esemthethweni neyomthetho ebalazweni lesayithi. Amakhasino aku-inthanethi abingelela abadlali ngephakethe lokwamukela elikhangayo elisatshalaliswa kumadiphozithi amane okuqala bese liyalandela ngombuso wokukhushulwa okuvamile namabhonasi. Isikhungo sibuye sihlomulise abadlali abaningi ngohlelo lokuthembeka olunamandla, oluholela kwi-elite VIP Club.
Ikhasino linikela ngendawo yokudlala esezingeni eliphakeme futhi linikeza indawo yokudlala elinganayo nephephile. Le midlalo ihlolwa njalo futhi iqinisekiswe ngemiphumela yemidlalo ekhiqizwa ngokungahleliwe. Imininingwane yomuntu siqu yamalungu ivikelwe inqubomgomo yobumfihlo futhi idatha ebucayi ivikelekile ngemuva kwezicishamlilo ezijwayelekile zomkhakha we-SSL. Ikhasino libuye libe nesigaba sokuqeqeshwa kwamakhasimende esiqeqeshiwe nesizinikele, lapho amalungu angathola khona imibuzo yawo exazululiwe.
I-Level Up Casino iyikhasino yamazwe omhlaba futhi yize amanye amazwe enqatshelwe, abadlali baseNingizimu Afrika bayamukelwa. Lokhu ukubuyekeza kwabadlali abavela kwiRainbow Nation futhi sizozama ukuthola ukuthi ngabe ikhasino ‘liyanyusa izinga’ yini kulindelwe abadlali baseNingizimu Afrika. Siyazi ukuthi iRandi laseNingizimu Afrika lingenye yezimali ezamukelwa yiLevel Up Casino.
2021 Amakhodi Ebhonasi e-Level Up Casino
Idiphozithi yokuqala I-100% ibhonasi efanayo efinyelela ku-ZAR 1000 noma i-1 BTC kanye ne-100 spins yamahhala
Idiphozithi yesibili I-50% ibhonasi efanayo efinyelela ku-ZAR 3,000 noma i-1,25 BTC enama-spins wamahhala angu-50
Idiphozithi yesithathu I-50% idiphozi efanayo efinyelela ku-ZAR 3,000 noma i-1.25 BTC
Idiphozithi yesine 100% idiphozi efanayo efinyelela ku-ZAR 3,000 noma i-1.5 BTC kanye ne-50 spins yamahhala
Sebenzisa amakhodi amakhuphoni LVL1, LVL2, LVL3, kanye ne-LVL4 ukuthola amabhonasi wediphozi yokuqala-1, 2, 3, no-4 ngokulandelana. Imali enkulu yediphozi enikiwe yi-ZAR 1,000. Imali encane okufanele yenziwe yi-ZAR 300; amabhonasi kufanele abhejwe amahlandla angu-40 ngaphambi kokuthi ukhiphe ama-winnings. Ama-spins amahhala azoklonyelwa kuphela ngemuva kokufakwa kwemali.
Amakhodi Ebhonasi Yediphozithi Engekho
I-Level Up Casino ibingenayo ibhonasi yokungafaki-mali ngesikhathi sokubhala. Lesi sigaba sizovuselelwa uma kunentuthuko engaphambili.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yi-Level Up Casino
Breezy Level I-40% match deposit ifinyelela ku- $ 100 noma i-0.01 BTC kanye ne-20 spins yamahhala. Izinga leBreezy litholakala kabili nsuku zonke kusuka ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu.
Breezy Boost I-70% idiphozithi efanayo ifinyelela ku- $ 100 noma i-0.02 BTC enama-40 spins wamahhala. Abadlali bangafuna iBreezy Boost kabili nsuku zonke kusuka ngoLwesihlanu kuya ngeSonto.
Weekend Level I-50% idiphozithi efanayo ifinyelela ku- $ 200 noma i-0.02 BTC kanye nama-40 spins wamahhala. Itholakala kabili nsuku zonke kusuka ngoLwesihlanu kuya ngeSonto.
Top Weekend I-50% idiphozi yomdlalo efinyelela ku- $ 1,000 noma i-0.1 BTC kanye ne-50 spins yamahhala. Itholakala kabili nsuku zonke kusuka ngoLwesihlanu kuze kube yiSonto.
Iklabu ye-VIP e-Level Up Casino
I-Level Up Casino ifaka i-VIP Club ngegama kodwa empeleni uhlelo lokuthembeka olunamazinga angu-20. Amalungu athola amaphuzu wokwethembeka kuyo yonke idiphozi. Ubhaliswa ngokuzenzakalela ku-VIP Club ezingeni lokuqala ngediphozi yakho yokuqala. Lapho usuqoqe amaphuzu wokuthembeka angu-20, ungawashintshanisa ngama-spins amahhala ayi-10. Inani lama-spins wamahhala liyanda kuwo wonke amazinga.
Lapho usufinyelele ezingeni lesi-7 ngamaphoyinti angu-2 000 okuthembeka, manje usungawahlenga ngo- $ 10. Manje, ungahlenga amaphuzu wemiklomelo emikhulu yemali ezingeni ngalinye elilandelanayo. Umklomelo wemali omkhulu kunawo wonke ungu- $ 30,000 ezingeni eliphezulu kakhulu lokuqongelela amaphuzu ayi-3,000,000 wokuthembeka. Amaphuzu wokuthembeka ayi-100 abiza i-17 ZAR.
Ungangena kanjani futhi ubhalise ku inthanethi ku-Level Up Casino
Ukudlalela imali yangempela e-Level Up Casino, kuzofanele uvule i-akhawunti kungxenyekazi yokudlala. Futhi ungakwenza kalula. Indlela enhle ukuchofoza inkinobho ethi ‘Bhalisa’ ngakwesokudla ngaphezulu bese ufaka imininingwane oyicelile. Uzothola amafomu amaningana azocela imininingwane yakho futhi kuzodingeka nokuthi ukhethe imali yakho negama lakho lomsebenzisi nephasiwedi. Ngokusayina, uzobe uvumelana Nemigomo nemibandela yekhasino kanye nenqubomgomo yayo yobumfihlo.
Halala! Manje usungafaka isicelo sakho sokuqala se-deposit bonus. Uma usuyivulile i-akhawunti yakho, ungangena ngemvume, futhi kusuka phezulu ngakwesokudla. Sebenzisa imininingwane oyikhethile ngenkathi ubhalisa.
Imidlalo Yekhasino eku-inthanethi Ongayidlala ku-Level Up Casino
Imidlalo ye-Casino eku-inthanethi Ongayidlala ku-Level Up Casino
I-Level Up Casino inikwa amandla yiSoftSwiss, uphawu olubonakala kakhulu emhlabeni we-iGaming. Umkhiqizo unikeza izixazululo zemidlalo eyenziwe ngezifiso kubahlinzeki bekhasino. Isikhungo sedijithali sisebenzisane nazo zonke izinsimbi ezinzima zesoftware yokudlala kuzo zonke izigaba zekhasino. Kukhona abahlinzeki bemidlalo abangaphezu kwe-40, konke okwaziwa kakhulu embonini nakwezinye izindawo ezingaphaya. Ngaphandle kwalezo ezishiwo kusingeniso ngenhla, zifaka iRed Tiger, i-EGT, i-Elk Studios, iBlueprint Gaming, iThunderkick, iSpinomenal, iHabanero, iMerkur Gaming, ne-Evoplay, njll.
Imidlalo ihleleke kahle endaweni yesikhulumi se-SoftSwiss. Ukukhethwa kwemidlalo ethandwayo kuyabonakala ekhasini lasekhaya ngezithonjana ezimibalabala ezimele zonke izigaba zekhasino kodwa ngokuqondakalayo kubuswa ama-slots. Umtapo wolwazi wemidlalo utholakala ngaphansi kwephaneli lesikhungo futhi uhlukaniswe waba yimidlalo ethandwayo, imikhakha yemidlalo ehlukene, imidlalo yokuthenga ibhonasi namajackpots. Kukhona nesigaba esinikezelwe emidlalweni, edlalwa ngeBitcoin. Futhi ungasesha izihloko ezingazodwana noma amageyimu kusuka konjiniyela abathile. Izindaba ezimnandi ukuthi yonke imidlalo iyatholakala ngemodi yedemo.
Amanye ama-Slots Ashisayo Emhlabeni
Njengawo wonke amakhasino aku-inthanethi, indawo yokubambela indawo enkulu kunazo zonke e-Level Up Casino, futhi iqukethe ama-classic asendulo ama-3 reel kanye nama-slots evidiyo amaningi anezici ezisebenziseka kalula nezindikimba ezisukela ezinganekwaneni nasezinganekwaneni kuya emidlalweni yezilwane nakuma-odisi isiko elidumile. Ezinye izihloko zemidlalo ezithandwayo ku-Level Up zifaka iBuffalo Power: Hold and Win, Titan Thunder: Wrath of Hades, Legend of Cleopatra Megaways, Majestic Megaways, Christmas Tree, Big Bass Bonanza, neManhattan Wild, njll.
Amathebula Amaningi Ongawadlala e-Level Up Casino
Yize ama-slots elawula indawo yokugembula kumakhasino, imidlalo yetafula iyaqhubeka nokuhlala izigaba zemidlalo eyisisekelo. Imidlalo yamakhadi ibilokhu ithandwa eminyakeni eyizinkulungwane futhi i-roulette ibhekele udumo lweMonte Carlo. Imidlalo yamakhadi idinga ikhono futhi kuvame ukushiwo ukuthi abadlali bekhasino bangempela batholakala ematafuleni. Zama amatafula afana ne-American Blackjack, i-Baccarat 4, i-Texas Hold ‘Em, i-Immersive Roulette, i-American Poker Gold, i-High ne-Low, ne-Roulette eningi enemithetho yaseFrance, yaseYurophu neyaseMelika.
Okuhamba phambili kwe-Poker Video
I-Video poker ikhule ngokuthandwa kakhulu selokhu yafika ekuguqulweni kwemidlalo yevidiyo engxenyeni eyishumi edlule. Yize i-poker idlalwe endaweni yezikhala seyisigaba sekhasino esiyinsika, ayinaso isimo esifanayo nemidlalo yetafula futhi naseLevel Up Casino ifakiwe endaweni yokwamukela izivakashi ematafuleni. Izihloko okufanele uzibheke ezandleni ezihamba zodwa nezimbalwa ngama-Jacks noma i-Better, ama-Wild Deuces, i-American Poker V, i-Joker Poker, i-Bonus Deuces Wild, ne-Double Bonus Poker, ne-Aces ne-Faces, njll.
Imidlalo ye-Bitcoin e-Level Up Casino
Yize zinempikiswano, ama-cryptocurrensets akhule kakhulu ekuthandweni ngesikhathi esifushane, futhi iBitcoin iyaqhubeka nokuhola phambili. Ama-Cryptocurrensies nawo azithandile ekhasino eliku-inthanethi ngoba lisiza ukuhwebelana okungenamthungo nokusheshayo. I-Level Up Casino ijoyina izindawo, ezinikezela isigaba sonke kumidlalo ye-BTC. Iziqu zifaka phakathi i-Aztec Magic Deluxe, iLady Lady’s Clover, i-Absolute Super Reels, iBlackjack 3 Hand, i-Lucky Roulette 500x, ne-Live Baccarat.
Isipiliyoni Sekhasino Langempela Ngemidlalo Ebukhoma
Ngenxa yokuqanjwa okusha kobuchwepheshe bokusakaza bukhoma, imidlalo yekhasino ebukhoma idume kakhulu futhi iba isigaba sekhasino esijwayelekile ngesikhathi esisheshayo. Imidlalo ebukhoma ihlinzeka ngesipiliyoni sekhasino ngokomzimba esiseduze nabathengisi ababukhoma abathandekayo, izesekeli zangempela ezinjengamakhadi, amasondo e-roulette nokunye ukusetha okwenzeka kuma-studio akude. Zama uchungechunge lweBlackjack Classic, i-Auto Roulette Speed, iMega Ball 100x, iBaccarat Live, i-Andar Bahar (iphume ngesiHindi), neCasino Hold ‘Em Live.
Ukhetho Olukhulu Lwama Progressive Jackpots
I-Level Up Casino inganikeza amalungu ithuba lamanethiwekhi e- progressive jackpot omhlaba wonke wabanye abakhiqizi bawo bemidlalo ababambe iqhaza. Ikhasino inezinhlobo eziningi zokukhethwa okuqhubekayo, kepha amanani abo awahambi phambili. Kukhona i-Divine Fortune nenguqulo yayo ye-Megaways, evamise ukukha phezulu izibalo eziyi-7. Ezinye izihloko zifaka i-At the Copa, Reels of Wealth, Greedy Goblins, Caishen’s Gold, Wild Wild Riches, Jackpot Express, Book of Gold, The Money Mania, ne-Age of Gods: Glorious Griffin, njll.
I-Level Up Mobile Casino: Iqhathaniswa Kanjani i-Level Up Casino Kuma Selula?
I-Level Up Casino iyahambisana nawo wonke amadivayisi weselula asebenza ku-Android, iOS, Windows Phone, naku-Blackberry, njll. Ungafinyelela kuphela ekhasino nasemidlalweni yalo ngesikhathi sangempela, okusho ukuthi ku inthanethi, ngakho-ke uzodinga ukuxhumana okuzinzile kwe-inthanethi nhlobo zikhathi zonke.
I-Level Up yekhasino ephathekayo cishe incane yesikhulumi se-PC, nezinguquko ezimbalwa zefomethi encane. Izixhumanisi ezibalulekile zicindezelwe kwimenyu ye-hamburger, ebekwe ngaphezulu kwesobunxele. Kuzofanele ukuthi upheqa ngokuvundlile kulabhulali yemidlalo, esilele ngaphansi kwephaneli lesikhungo.
Imidlalo yeselula ifakwe ikhodi nge-HTML5, futhi ungadlala imidlalo eminingi kulabhulali ohambeni, kufaka phakathi i-Elvis Frog, i-Moon Sisters: Hold and Win, Gold Digger, Money Train 2, Fu Fortunes Megaways, Blackjack Lucky 7s, VIP Roulette, Draw High Low, neSuper Sic Bo, njll.
Ngingayi dawunilodal i-Level Up Casino kuselula yami
Awukwazi ukulanda i-Level Up Casino kunoma iyiphi idivayisi. Izinsuku zezinhlelo zokusebenza zekhasino ezingaxhunyiwe ku-inthanethi zidlulile. Amakhasino wanamuhla awanikeli ngezinguqulo zama-casino ezingalandeka. Ungadlala kuphela ku-Level Up ku inthanethi.
Izindlela Zokuhoxa Nezidiphozithi Ezamukelwa e-Level Up Casino
Visa Yebo Izinsuku 2-4 Yebo
MasterCard Yebo Izinsuku 2-4 Yebo
Maestro Yebo Izinsuku 2-4 Yebo
Venus Point Yebo Okusheshayo Yebo
Bitcoin Yebo Okusheshayo Yebo
Bitcoin Cash Yebo Okusheshayo Yebo
Ethereum Yebo Okusheshayo Yebo
Litecoin Yebo Okusheshayo Yebo
Dogecoin Yebo Okusheshayo Yebo
Tether Yebo Okusheshayo Yebo
Bank Transfer Yebo Okusheshayo Cha
Level Up Casino Inhlangano kanye Imininingwane Yokuxhumana
Level Up Casino Ulwazi oluvamile
Level Up Casino Imininingwane Yokuxhumana
Kusungulwe: 2020 Inombolo yamahhala ye-SA: Cha
Opherethwa ngu: Dama N.V. Imeyili: [email protected]
Ilayisensi ngu: Curacao Ingxoxo Esheshayo: Yebo
Amakhasino Weselula: Yebo Ukuxhaswa kwe-24/7/365: Yebo
Ayikho inguqulo Yokulanda: Cha Iwebhusayithi
Izinzuzo nezingozi ze-Level Up Casino
Umtapo wolwazi omkhulu wonjiniyela bezinkanyezi Ama-progressive jackpots awatholakali
Iphakethe lokwamukela elikhangayo Amanani entuthuko awanikezwa ngaphambili
Ama phromoshini avamile ne-VIP Club Amanani ebhonasi angafakwanga ohlwini ku-ZAR kuwebhusayithi ye-SA
Amakhasino abukhoma nama-progressive jackpots Amageyimu angavamile akatholakali
Ipulatifomu yemidlalo elinganayo neVikelekile Ayikho inombolo yamahhala yaseNingizimu Afrika
Yamukela iRandi laseNingizimu Afrika
Yini eyenza i-Level Up Casino ibe Ukhetho Oludumile Kwabadlali BaseNingizimu Afrika?
Imidlalo eshisayo kakhulu evela kunjiniyela abangaphezu kuka-40 bemidlalo ephezulu
Ama-lobbies amakhulu emidlalo ebukhoma kanye nama-progressive jackpots
Iphakheji yokwamukela enezinyathelo ezi-4 kufaka phakathi ama-200 spins wamahhala
Amaphromoshini amaningi phakathi nesonto nangempelasonto
Uhlelo lokuthembeka olunomvuzo neVIP Club
Ipulatifomu yokudlala efanelekile nephephile
Izikhalazo e-Level Up Casino yase Ningizimu Afrika
Zimbalwa izigidi ze-progressive jackpots
Inani lama-progressive jackpots aluboniswa
Ayikho inombolo yamahhala yaseNingizimu Afrika
Imibuzo Ebuzwa Njalo (Ama-FAQ)
Ngabe i-Level Up Casino isemthethweni eNingizimu Afrika?
Amakhasino aku-inthanethi awekho emthethweni eNingizimu Afrika. Imithetho yezwe yokugembula ayikuvumeli amakhasino aku-inthanethi ukuthi anikeze ngezidingo zawo kubahlali baseNingizimu Afrika. Kodwa-ke, iziphathimandla azikwazi ukuvimba izakhamizi zayo ekudlaleni kumakhasino aselwandle. Uhulumeni akakhombisi abadlali baseNingizimu Afrika ngokudlala kumakhasino anjalo.
Ngiyikhipha kanjani imali kwi-Level Up Casino?
Hlola ukuthi unayo yini ibhalansi eyanele ongayikhipha futhi awunazo izibopho zokubheja. Uma konke kuhamba kahle, yenza isicelo ‘Ekuhoxisweni’. Khetha indlela yakho yokukhokha bese ufaka inani ofuna ukulikhipha. Uzoyiswa ekhasini lomhlinzeki wakho wesevisi yokukhokha lapho uzofaka khona imininingwane yakho yasebhange. Ngemuva kwalokho vele uthumele isicelo sakho.
Yini i-Level Up Casino?
I-Level Up Casino iyinsizakalo ephelele yekhasino eku-inthanethi esungulwe ngo-2020. Banikela ngemidlalo kuzo zonke izigaba zamakhasino ezinikezwa ngabadali bemidlalo bangaphambili abangu-40. Isayithi lisebenza kuphela kungxenyekazi yokudlala esheshayo esuselwa esipheqululini futhi ingafinyeleleka kalula kuma-smartphone nakumathebulethi.
Ngubani ophethe i-Level Up Casino?
I-Level Up Casino iphethwe yiDama N.V., inkampani ebhalisiwe futhi enamalayisense eCuracao.
Ingabe i-Level Up Casino inezici zokubheja ezemidlalo?
Cha, i-Level Up Casino ayinayo incwadi yezemidlalo.
Ingabe i-Level Up Casino inikela ngohlelo lwe-VIP?
Izinga le-VIP Club le-Level Up Casino uhlelo lokuthembeka. Abadlali banikezwa amaphuzu okuthembeka kudiphozi ngayinye. Amalungu aqoqa okungenani amaphuzu angama-20 okuthembeka angawashintshanisa ngama-10 spins wamahhala. Kunamazinga angama-20 anama-spins wamahhala nemiklomelo yemali ekhulayo ezingeni ngalinye.
Yiziphi izidingo zokubheja eLevel Up Casino?
Izidingo zokubheja kuwo wonke amabhonasi ajwayelekile ziphindwe izikhathi ezingu-40 inani lebhonasi. Ama-spins wamahhala anikezwe ngamaphoyinti okuthembeka aphatha isidingo sokubheja izikhathi eziyishumi. Ngisho nemali ehlengiwe ngokumelene namaphoyinti okuthembeka kuzodingeka ibhekane kanye.